Sunaulo Nepal | काठमाडौं महानगरमा २० हजार मत बदर ! घाटा कसलाई ? काठमाडौं महानगरमा २० हजार मत बदर ! घाटा कसलाई ? – Sunaulo Nepal
काठमाडौं महानगरमा २० हजार मत बदर ! घाटा कसलाई ?
२ जेठ काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा १ हजार मत गणना गर्दा १०७ मत बदर भएको छ । यो संख्या भनेको खसेको मतको १० प्रतिशत हो । अब यही रुपमा बदर मतको संख्या कायम रहेमा मतगणना गरिसक्दा २० हजारभन्दा बढी मत बदर हुने देखिएको छ ।
यति ठूलो संख्यामा मत बदर भएमा त्यसबाट सबैधन्दा बढी घाटा कसलाई होला ? एमाले, कांग्रेस वा साझा पार्टीलाई ?
सामान्यरुपमा हेर्दा बदर मतको बेफाइदा एमाले र कांग्रेसलाई नै हुन सक्ने देखन्छि । कसरी ? हेर्नुहोस् विश्लेषणः
काठमाडौंको बिजेताले कति मत ल्याउनुपर्ला ?
काठमाडौं महानगरपालिकाका कुल मतदाता संख्या हो- २,७९३०५
मत खसेको (७६ प्रतिशत) आधारमा हेर्दा महानगरपालिकामा खसेको मत संख्या हो करिब- २,१२,०००
यो संख्यामा अहिलेको जस्तै १० प्रतिशत मत बदर भयो भने बदर हुने कुल मतसंख्या करिब २१००० हुनेछ ।
यो स्थितिमा हारजितका लागि गणनायोग्य मतसंख्या लगभग १९१००० बाँकी रहनेछ ।
यो सदर मतसंख्यालाई कम्तिमा चार जना उम्मेदवारवीच विभाजन गर्दा काठमाडौंको मेयरमा बिजेताले लगभग ६० हजार मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई लचकदार रुपमा के पनि भन्न सकिन्छ भने काठमाडौंको मेयरको विजेताले लगभग ५० हजारभन्दा बढी मत ल्याउनैपर्ने हुन सक्छ ।
बदर मत कसको ?
यो निर्वाचनमा कसैले २० हजार मत एक मुष्ट काट्यो भने सम्भावित विजेताका लागि त्यो निकै दुःखको विषय बन्न सक्छ ।
कुनै तेस्रो पार्टीले १०/१५ हजार मत काट्दा आफूलाई घाटा हुने विश्लेषण गरिरहेका कांग्रेस र एमालेका लागि बदर मत नै २० हजार पुग्नु भनेको निकै ठूलो त्राशदीको विषय हो । किन भने त्यसैको मत बढी बदर हुन्छ, जो जित्ने सम्भावना रहेको हुन्छ ।
सामान्यतः २० हजार मत बदर भयो भने त्यसमा कांग्रेस र एमालेकै बढी क्षति हुन्छ । र, कांग्रेस र एमालेलाई त्यसरी क्षति पुग्यो भने यसको साझो फाइदा किशोर थापा वा रञ्जु दर्शनालाई पुग्न सक्छ ।
प्रथमतः क्यामेरा र स्टकोट चिन्ह एउटा/एउटा मात्रै भएकाले लहरै भएका रुख र सूर्यमा जस्तो किशोर र रञ्जुको मत कम बदर हुनु स्वाभाविकै हो ।
दोस्रो- जितको सम्भावनामा पहिलो र दोस्रो लहरमा रहेका दलहरुको मत भटाभटी बदर भइदिँदा त्यसको फाइदा स्वाभाविकरुपमा तेस्रो र चौथोमा भिडिरहेका उम्मेदवारहरुलाई हुन सक्छ ।
मतगणना स्थलको भित्री तस्वीर
मत गणनामा बसेकाहरुका अनुसार मेयरमा मत बदरको ट्रेन्डमा केही रोचक देखिएको छ । साझा पार्टी समर्थित किशोर थापालाई मत दिने धेरै मतदाताको मत बदर भएको देखिँदैन । किशोरलाई मत दिएपछि बाँकी ५ भोट धेरै कांग्रेसलाई गएको छ । उद्यपि किशोरले एमालेको भोट काटेकै छैन भन्ने अवस्था छैन ।
ठीक विपरीत मेयरमा विवेकशीलकी रञ्जु दर्शनालाई भोट दिनेले बाँकी भोट भने धेरैतिर छरिएको छ । गणनास्थलका एक प्रतिनिधिले दिएको जानकारी अनुसार रञ्जुलाई मेयरमा भोट दिनेले मेयरमै सूर्य वा रुखमा पनि मेयरमा मत दिएको पनि भेटिएको छ, जुन मत मेयरमा कसैले पनि पाउने छैन् । रञ्जुले ‘बदर गराएको’ यस्तो मतको संख्या रुखको तुलनामा सूर्यको बढी छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सुरुवाती मत गणनाको ट्रेन्ड हेर्दा वडा नम्बर १ को १५० भोट गणनामा किशोर थापाको एउटा पनि बदर नभएको एक गणकले जानकारी दिए । त्यस्तै ६०० मत गन्दा मेयर र उपमेयरको ६७ मत बदर भएको थियो भने अन्य उम्मेदवारको मत बदर संख्या १०० कटेको छ । साभार: अनलाईनखबर
२ जेष्ठ २०७४, मंगलवार ११:३१ मा प्रकाशित